Agụụ Cleaner (3) Factory - China agụụ Cleaner (3) Manufacturers, Suppliers
10L / 15L ogbi Type agụụ Cleaner - HT-10S / HT15S / 15J
Ihe kpatara ike dị ukwuu, ihe kachasị achọpụta na ihe nhicha ọkụ bụ mkpọtụ, mana ọtụtụ mpaghara ọha enweghị ike ịnakwere mkpọtụ site na igwe nhicha na oge azụmahịa. HT-10S bụ ogbi ụdị agụụ Cleaner, obere ahu nwere ike na-akpụ akpụ na ngwaahịa mfe.
20L / 32L / 45L Wet kpọrọ nkụ agụụ Cleaner YJ1020 1032 1245
Mmiri na akọrọ agụụ Cleaner bụ isi nke tragaasi mkpoko, ọ na-iji mee ka mmiri mmiri wụsara n'ala dị ka wheel dị ka akọrọ unyi na ájá. Ejiri ya maka ọrụ dị oke mkpa, ọkachasị na azụmaahịa. Agbanyeghị, ọdịdị ọhụrụ, nke kọmpụta nwere nha dịgasị iche iche ka ndị nrụpụta mepụtara maka arụ ụlọ.
15L / 32L / 45L Wet kpọrọ nkụ agụụ Cleaner BS-1020A 1032A 1245A
Onye nhicha ọkụ ọ bụla na-abịa na ọtụtụ mgbakwunye. Ihe mgbakwunye ọ bụla nwere ihe a kapịrị ọnụ, ụdị nhicha ị ga-amalite ga-ekpebi mgbakwunye ị ga-eji.
15L / 30L Wet na akọrọ agụụ Cleaner H6001 H6002 H6003
Onye nhicha ọkụ ọ bụla na-abịa na ọtụtụ mgbakwunye. Onye ọ bụla na-ekekọta nwere a kapịrị ọnụ ojiji, na ụdị ihicha ọrụ ị na-aThe mmiri na akọrọ agụụ bụ a nnọọ mkpa ngwá ọrụ ruru ya egosipụta na ojiji. N'ụzọ na-akpali mmasị, ọ bụghị naanị ike ihichapụ irighiri ihe, wepụ ájá na ị suụ mmiri mmiri, ma o nwekwara ikike ịrụ ọtụtụ ọrụ dịka ndị edepụtara n'okpuru ebe a.
70L / 80L Wet na Nkpuchi Vacuum Cleaner H6004 H6005
The ákwà nyo n'ime ka ị ọcha ọcha agụụ mfe na ọ nwere ike ichebe agụụ si ájá mebiri.
70L / 80L Wet na Cleaner agụụ Cleaner na squeegee H6006 H6007
Ngwurugwu agụụ na-eme ka nhicha ahụ dịkwuo mma ma dị mfe.
15L / 30L / 60L / 80L Wet na kpọrọ nkụ agụụ Cleaner LC151, LC301, LC602S, LC 802S
Mmiri a na-ehicha mmiri na-ehichakarị n'ụzọ dị mfe. Ọ na-eji usoro ịwụ abụọ ejiri mee ihe nkewapụ ihe ndị mmiri mmiri na ndị siri ike. Ihe nhicha ahụ nwekwara ọdụ ụgbọ mmiri na-amịpụta unyi niile ga-agagharị na tube na ihe mkpofu ndị ọzọ a suụrụ.
90L Wet na akọrọ agụụ Cleaner H6015 H6016
Ngwongwo plastik na-eme ka mmiri na-egbuke egbuke, acidproof na mgbochi alkalis, na nkwụsi ike.